Global Voices teny Malagasy » Fantaro ireo bilaogera ao Kwa Mashu, Afrika Atsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Aogositra 2018 0:04 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Liva Andriamanantena
Kwa Mashu , ilay faritra lehibe indrindra amin'ny kaominina  miisa telo ao Durban , dia malaza amin'ny tahan'ny heloka bevava, aretina VIH ary ny fahantrana izay samy avo avokoa. Kanefa fanta-daza manerana ny faritra ihany koa i Kwa Mashu noho ny toerana ara-kolontsainy miroborobo sy ireo mpilalao sarimihetsika malaza, mpihira ary mpilalao baolina fandaka teraka sy niha-lehibe tao an-toerana.
Nanana ampahany betsaka tamin'ny fandrisihana sy ny fananganana ofisialy ny ivontoerana ho an'ny talenta ara-javakanto tao Kwa Mashu ny K-CAP, ilay Tetikasa Fampandrosoana ho an'ny Vondrom-piarahamonina ao Kwa Mashu , izay nanokatra ny Foibe Ara-javakanto isankarazany Ekhaya tamin'ny taona 2004 noho ny fanampiana sy ny fanohanana avy amin'ny Orina Mpanasoa Fandriampahalemana sy Fanarenana, ny Orina Mpanasoa Lôtô Nasionaly, ny Kaonsilà Britanika, ary ny maro hafa. Indro ny fitsidihana fohy tao amin'ny Foibe Ara-javakanto Isankarazany Echaya avy amin'ireo bilaogera roa vaovao indrindra, Sam  sy Gugu  :
Nahazo fanohanana ara-bola madinika avy amin'ny Rising Voices ny K-CAP  ny volana Jona 2008 mba hampiofanana ireo vondrona tanora mpianatra zavakanto amin'ny fomba famahanana bilaogy, miaraka amin'ny lohahevitra manokana momba ny fahasalamana ao Kwa Mashu. Nanazava momba ny tetikasa tamin'ny volana lasa teo  (May) ny Toniandahatsoratra ara-pahasalamana Juhie Bhatia. Ireto ny sasany tamin'ireo mpanakanto nanoritsoritra ny bilaogin'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fanazavany manokana:
Taorian'ny atrikasa roa andro izay nampianarana ny fototry ny famahanana bilaogy sy ny fizarana sary nomerika, dia nanapa-kevitra izahay ny hanao lahatsary fanadihadiana fohy momba an'i Kwa Mashu amin'ny alàlan'ny fomba fijerin'ireo tanora mponina ao an-toerana ireo. Gugu  sy Sam  no vahinin'ilay fanadihadiana. Ncebo  no mpaka sary. Ilay tena mpanan-talenta Sibonelo no nanoratra, namolavola, ary namokatra ny hira rehetra.
Hanohy hanoratra ny momba azy ireo, ny vondrom-piarahamoniny ary ireo olana mifandraika amin'ny fahasalamana atrehiny ireo tanora mpanakanto ao amin'ny K-CAP. Azonao fantarina bebe kokoa ny momba an'i Kwa Mashu avy ao amin'ny dokambarotra Still My Home  , horonantsary fanadihadiana novokarina niaraka tamin'ny K-CAP.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/06/124159/
 Tetikasa Fampandrosoana ho an'ny Vondrom-piarahamonina ao Kwa Mashu: http://www.kcap.co.za/
 Nahazo fanohanana ara-bola madinika avy amin'ny Rising Voices ny K-CAP: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/06/28/public-health-projects-to-use-citizen-media-to-empower-community-voices/
 Nanazava momba ny tetikasa tamin'ny volana lasa teo: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/09/12/breaking-the-silence-hivaids-in-kwa-mashu/
 dokambarotra Still My Home: http://www.halaqah.com/stillmyhome/stillmyhome_trailer.htm